गर्मीमा के–के खाँदा स्वास्थ्य लाई फाईदा हुन्छ ? जानौँ |
गर्मीमा के–के खाँदा स्वास्थ्य लाई फाईदा हुन्छ ? जानौँ
On: २०७६ असार ३ गते, मंगलवार, ०३:३० बजे प्रकाशित
काठमाण्डौ । यति बेला नेपालमा मध्य गर्मी छ । गर्मीयाममा खानेकुरामा निकै सचेत हुनुपर्छ । विशेषगरी राति खाने खानामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, ता कि निद्रा तथा पेटसम्बन्धी कुनै प्रकारको समस्या नआओस् ।
गर्मी मौसममा कस्तो खाना खाँदा फाईदा हुन्छ ? आउनुहोस् जानौँ –
अन्य सम्बन्धित समाचार: २४ घण्टामा ३ हजार ९३ संक्रमित थपिए: २ हजार १०८ जना डिस्चार्ज
गर्मीको समयमा उसिनेको वा फ्राई गरेको आलु खानाले राम्रो गर्छ । आलुमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, जसलाई पचाउन सजिलो हुनुका साथै गर्मीसँग लड्न पनि सहयोग र्पुयाउँछ । यसको सेवनले निद्रा पनि राम्रोसँग लाग्छ ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर ९ गतेदेखि (तालिका सहित)
२०७६ असार ३ गते, मंगलवार, ०३:३० बजे प्रकाशित